Ndị ọkachamara na-ahụ maka ihe mgbochi mmiri na-eme ihe ga-eme ma ọ bụrụ n'Ịntanet okporo ụzọ dị n'okpuru
Ọ dị ka ihe nro mgbe ị hụrụ na Google ma ọ bụ ndị ọzọ search engines na-arụ ọrụ SEO, ọ nweghịkwa ụzọ isi kpochapụ nsogbu a. Iji nweta usoro okporo ụzọ maka saịtị gị, ị kwesịrị igwu egwu na-ebipụta isiokwu dị iche iche, ma chọpụta ihe ụdị search engine optimization strategies dị mkpa maka ebe nrụọrụ weebụ gị.
I kwesịrị icheta ihe ndị a, bụ ndị Jason Adler, ọkachamara ọkachamara Semalt kwadoro iji dozie ọtụtụ n'ime nsogbu gị metụtara SEO.
Usoro nke Njikwa: Lelee Ngwaọrụ Webmaster
Nke mbụ na nke kachasị mkpa bụ na ị kwesịrị ịlele ngwaahịa ngwá ọrụ webmaster ma chọpụta ndụmọdụ ndị dị mkpa n'ebe ahụ. Nwee emelite na ngwaọrụ kachasị ọhụrụ ma nweta onwe gị ndị mmadụ ole na ole iji chịpụ okwu ndị nwere ike ime ka nkwụsịtụ na arụmọrụ gị.
Bing na Google na-enye ndị ọrụ ha ọtụtụ ngwaọrụ. Ị nwere ike ịme onwe gị ka ị gbanwee ya na ha ma zere nkwụsị ọ bụla nke weebụsaịtị - logiciel de solution d'affaires. Ọ bụrụ na ị nwere ihe niile dị mkpa maka webmaster tools, enwere ọhụụ na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-enweta ọkwa dị mma na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụrụ na ị debanyere aha ma kwenye na ebe nrụọrụ weebụ gị na ngwaọrụ ndị ahụ, ikekwe ị ga-anabata nsogbu na ụbọchị na-abịanụ.
Esemokwu ihe ruru: Lelee nyocha
Ọ bụrụ na ngwá ọrụ weebụ gị niile dị mma, ị ga-aga nyocha ọchụchọ nke Google iji nyochaa akụkọ Google maka okporo ụzọ azụmahịa gị. Jide n'aka na o kwekọtara ụkpụrụ nke nyocha ahụ. Ma ọ bụghị ya, saịtị gị ga-emetụta. Ọ bụrụ na akụkọ ahụ dị iche, a ga-enwe nsogbu ị chọrọ idozi ozugbo o kwere mee.
I kwesịrị ilebara anya na arụmọrụ nke saịtị gị ma ghara ikwe ka ọ belata na ụgwọ ọ bụla. Ozugbo ị edoziwo nsogbu niile gbasara nhazi, nzọụkwụ ọzọ bụ ịtụle mgbanwe nke saịtị gị ma debe ha. A ghaghị emetụta mgbanwe nke isiokwu gị ozugbo o kwere mee. Nyocha akụkọ sitere na Analytics Google kwa ụbọchị ma jiri ha tụnyere ibe ha iji chọpụta ụdị mgbanwe ọ ga-adị mkpa n'akụkụ gị.
Iji dozie esemokwu algorithmic, ị kwesịrị ịlele mkpụrụokwu gị na nkebi ahịrịokwu gị. Ị kwesịrị iji nlezianya hụ ma ọ bụrụ na ha na-enweta usoro mgbasa ozi saịtị gị ma ọ bụ na ọ bụ, a pụkwara ịchọta ihe a nile na Google Analytics dị mfe.
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji lelee Penguin Tool na banye ebe a. I kwesịrị ịmepụta akaụntụ Google ma tinye nchịkọta gị iji nweta mmelite kachasị nke algorithm nke Google na mgbe niile. Ngwaọrụ a ga-agwa gị ma arụmọrụ nke saịtị gị na-ebelata na ihe nwere ike bụrụ ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na e nwere nsogbu na saịtị gị na algorithm ya, Ngwá Ọrụ Penguin ga-eme ka ị dị ọhụrụ. Google nwere ike ịchọta na onye na-esite na saịtị gị ma ọ bụrụ na ị dozie nsogbu ahụ n'oge o kwere omume. Ị kwesịrị ị na-enyocha ihe SEO gị ma na-ahọrọ ndị nke nwere ike ịbụ nnukwu maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Debe isiokwu ndị dị ala na ịtinye mkpụrụ okwu dị mkpa n'ime ha maka njikarị ọrụ search engine kacha mma